Amagumbi amancinci eLerma, uya kubuya :) - I-Airbnb
Amagumbi amancinci eLerma, uya kubuya :)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguFdo
Igumbi lincinci kodwa likhululekile kwaye likhanya kakuhle, linesitulo esincinci kunye netyali. Ifestile ngokujonga ngaphakathi kwendlu. Indlu ngokubanzi ipholile kwaye inobushushu obulungileyo. Izithuba zigcinwa zicwangcisiwe, kunye negadi ukuze ube nekofu okanye ujabulele emva kwemini.
Indlu ibekwe ngaphakathi kuluntu olunamasango anokufikelela okuthintelweyo kunye neekhamera zokhuseleko. Ungangena ngolawulo lwesithuthi okanye ngesitshixo sabahambi ngeenyawo. Ulwahlulo lunokhuseleko lwabucala. Kuhlala kuzolile kulo mmandla.
4.71 · Izimvo eziyi-15
Yindawo ethule kakhulu kwaye unokufudukela ngokulula kwi-CDMX, iToluca kunye noomasipala abangabamelwane, ngakumbi iidolophu ezinomlingo ezifana neValle de Bravo (iyure ye-1), i-Ixtapan de la Sal, iMalinalco, iTenancingo kunye nezinye ezininzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Fdo
Ndihlala kwigumbi eliphambili kwaye ngokuqinisekileyo siya kuhlala kunye ngamaxesha athile kwaye sinokufumana ikofu ukucebisa iindawo kunye neziza ezinomdla. Amaxesha amaninzi iNdlu iyodwa, kwaye ungasebenzisa iindawo eziqhelekileyo ezifana nesifundo, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, ikhitshi, umatshini wokuhlamba kunye negadi encinci.
Ndihlala kwigumbi eliphambili kwaye ngokuqinisekileyo siya kuhlala kunye ngamaxesha athile kwaye sinokufumana ikofu ukucebisa iindawo kunye neziza ezinomdla. Amaxesha amaninzi iNdl…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lerma de Villada